Piper's Rise Foreword — njem Lee - Official Site
Ma akwụkwọ bụ tozuru okè. Ọ ji ma ụmụ tozuru okè. Ọ ikpono afọ. Njem maara ihe na-apụghị afọ. Ọ na-ahụ ama ihe afọ akụziri. Ume ọ bụla bụ onyinye. Ọ bụla oge a ntụkwasị obi.
"Igbu oge bụ ara. Ọ bụ dị ka ọkụ ego. The naanị ihe dị iche bụ ị pụrụ ime ka ego, ma i nwere ike ime ma ọlị ka ndị ọzọ oge. "
M na-akpọ nke a a nsọpụrụ maka ihe ka mkpa. Ndụ dị oké ọnụ ahịa. na obere. Njem na-akpọ gị na-ebi ndụ n'ihi na ihe ka mkpa. Na-ebi ndụ passionately, ọṅụ. Beyond-enweghị isi na. Beyond jụụ na-aghọ nkọ.
Ọ bụrụ na anyị na-biliri n'elu ugwu Himalaya ụzọ n'ime ebube Chineke, anyị ga-ama ụzọ na ileghara. "Emighị emi mgbọrọgwụ iduga shaky footing, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iguzosi ike anyị nwere na-emi emi. "Njem na-edu gị n'ebe. Na-emi emi ya ka na-aga elu. ebili.
MicahKelley • January 26, 2015 na 8:11 Abụ • zaghachi
Nke a na-atụ bụ n'ezie ezi na m nwere olileanya na ozugbo m na-agụ akwụkwọ, na-ebili ka ukwuu elu na miri di omimi n'ime Onyenwe anyị.
Cristella • January 26, 2015 na 10:41 Abụ • zaghachi
Nke a Bụ Great
M n'aka na cant echere iji na-agụ akwụkwọ Rise
Grace na Peace gị njem
ChriseldaDirrim • January 26, 2015 na 12:07 pm • zaghachi
Achọrọ m na-agụ ya ugbu a!
Nicholas theron ubi • January 26, 2015 na 1:26 pm • zaghachi
Ekwenyere m na e nwere mba ebe na igbu oge. Ma echefula na-enwe gị oge. Inwe fun ọ bụghị ihe ọjọọ ya otú i nwere fun. Ị ga-esi gị ụtọ site na ụfọdụ onye ọzọ mgbu. Ọ na-emejọ na-ezu ohi site na onye ọzọ na-enye gị ọṅụ na obi ụtọ. Ọ na-ejide nwa nwoke ọzọ na chi ala. Ọ na-enye gị ike na-ebu na. Ọ na-enye gị nwoke mmetụta. N'ịbụ a ezigbo nwoke. Na-gwara ihe na ibu arọ gị ndụ na-ezighị ezi ma ọ bụ na-ahapụ gị ìsì. Ịgwa nwa nwoke ọzọ nke Chineke na-agaghị na-ekwusa bụ ihe ọjọọ. Ma ọ bụ na-abụ abụ. Ma ọ bụ na-agba ọsọ site na ụfọdụ otu onye nwere ike inyere gị aka na miri darker akụkụ nke ime mmụọ gị na-eje ije. Your àmà. Ihe kpatara ị na-eso chi dị nso na ike dị ka ị na-eme. Anyị na-agba naanị n'ihi na anyị na-ahụghị omimi nke chi plan. The n'ezie ewute ná ndụ anyị. The akụkọ na mgbe ego n'anya gwara. Chineke wee nke furu efu. The agbajikwa. The ụjọ. The ikpe. Uche na-ọgụgụ isi. Ma anọgide na-gwara ha adịghị mma. Dịghị azọpụta gị mma maka ikpeazụ ọzọ. Chineke na-abịa. Anyị nwere ike amaghị ụbọchị ma ọ na-abịa. Na mgbe ọ na-eme anyị niile ga-egwu Jehova n'ihi na ọ maara ihe ziri nnọọ ezi. Ọ maara ihe kasị mma. M ga na-agụ gị akwụkwọ mgbe oge ya Chineke na-agọzi.
họpụtara John • January 27, 2015 na 5:41 Abụ • zaghachi
Chaị! Nke a bụ n'ezie egwu, i m ike na-eche maka akwụkwọ. njem, ihe amara na ịmị mkpụrụ gị ozi alaeze!
Burton • January 27, 2015 na 4:53 pm • zaghachi
M ike na-eche maka ndeputa m tupu-nyere iwu na-esi na m na ebe! Daalụ njem na-ede akwụkwọ ga-enyere nwa agbọghọ dị ka onwe m.
aha: music Monday – Bilie site Njem Lee | Ogidi nke Eziokwu Ministry